2021 NYC White Label Expo's Lead Manufacturer of the Year nomena ny GVB Biopharma
Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » 2021 NYC Mpanamboatra lohalaharana White Label Expo an'ny taona nomena an'i GVB Biopharma
2021 NYC Mpanamboatra lohalaharana White Label Expo an'ny taona nomena an'i GVB Biopharma
GVB Biopharma, mpitarika ny famokarana akora mavitrika cannabinoid azo avy amin'ny hemp sy ny famolavolana vokatra marika fotsy, dia nanambara androany fa nomena anarana hoe Mpanamboatra ny Taona izy amin'ny 2021 New York City White Label Expo. Ny hetsika, izay atao isan-taona amin'ny fararano, dia miasa ho toy ny seho voalohany sy ny sourcing seho ho an'ny mpivarotra an-tserasera.
Ny mari-pankasitrahana dia eken'ny mpanamboatra miavaka amin'ny vokatra marika fotsy, izay mamela ny fanavaozana marika ataon'ny antoko fahatelo. Ny White Label Expo dia manoritsoritra fepetra telo mifantina ho an'ny nahazoany ny Loka Mpanamboatra ny Taona: fifandraisana matoky amin'ny mpanjifany, rafitra fanaraha-maso kalitao mitarika indostria ary traikefa mpanjifa tsy misy olana. Telo no voafidy farany, ary ny GVB Biopharma no voafidy ho mpandresy tamin'ireo orinasa 400 mahery. Ny loka dia iray amin'ireo mari-pankasitrahana indostrialy efatra nomena ho an'ny fahombiazana miavaka eo amin'ny sehatry ny famokarana, fanavaozana ny vokatra, serivisy ary fametahana marika manokana.
"Miasa mafy izahay mba hanosehana ny indostria amin'ny vokatra vaovao sy ny fenitra fanarahan-dalàna," hoy i Phillip Swindells, Tale Jeneralin'ny GVB Biopharma. Ny orinasa dia nekena tao amin'ny White Label Expo noho ny famokarana sy fanodinana modely, izay namorona fenitra indostrialy vaovao ho an'ny fanaraha-maso ny kalitao sy ny fahamendrehan'ny asa.
Ny hamafin'ny fepetra fanarahan'ny GVB Biopharma sy ny fenitry ny kalitaon'ny vokatra dia nahatonga azy ho iray amin'ireo anarana hajaina indrindra amin'ny indostrian'ny hemp cannabinoid. Miaraka amin'ny fitaovana maoderina ho an'ny fanodinana hemp any Oregon, ny famokarana vokatra mpanjifa misy marika fotsy any Las Vegas, ary ny biraon'ny varotra nasionaly any Los Angeles, Chicago, Denver ary South Florida, ny GVB dia naneho fahaiza-manao amin'ny fitomboana goavana. . Ny fahatongavany manerana ny firenena sy eran'izao tontolo izao dia ahafahany mahafeno ny fangatahana mipoapoaka ho an'ny cannabinoids hemp ary ho mpiara-miombon'antoka amin'ny indostria tena ilaina ho an'ny mpandraharaha sy ny marika manompo ny filan'ity tsena ity.
Vaksina COVID-19 vaovao ho an'ny ankizy: Vadin'i Etazonia...
Sidina vaovao mankany Las Vegas avy any San Jose, Boston...
Ny mpamokatra tsara indrindra amin'ny fitaovana fandroana